မနှစ်က ကောင်မလေး.. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Arts & Humanities » မနှစ်က ကောင်မလေး..
Posted by ムラカミ on Jun 16, 2014 in Arts & Humanities, Society & Lifestyle | 38 comments
အရမ်း တည်ငြိမ် ပြည့်ဝတယ်လို့ ယူဆထားတဲ့ ကောင်မလေး..
ထူးထူးခြားခြား ကလေးတယောက်လို ဂျီကျ ဖူးတာ ၁နှစ်ပြည့်တယ်..
မာနမရှိတဲ့ အဲ့ ကောင်မလေးက … သူငယ်ချင်းဘ၀တုန်းက
ရေးခဲ့ပြောခဲ့တဲ့ စာတွေ အောက်မှာ ကောမန့် အသစ်ရေးတာကိုပေါ့…
ဦးဂီ … အဲ့သည့်တုန်းကတည်းက ငါ နင့်ကို ကျိတ်ချစ်နေမိတယ် တဲ့ …
မနှစ်က သည်လိုအချိန် က တိုက်ကြီးများဖလား ကန်တယ်ဗျ …
ထုံးစံအတိုင်း … ဘောသမားအကြောင်းတွေ ပုံတွေ စာတွေ တင်ပေါ့..
အီဂျစ်ကလာတဲ့ ကီလားလေးတယောက်ပုံ တင်လိုက်တော့…
ဦးဂီ … ခညားယီး ကြိတ်ပြီး ခြောက်နေတာလား ဟမ် ..ဆိုပြီး ရန်တွေ့ဖူးတာပါ..
အံ့သြမိခဲ့ဖူးတယ်..တကယ်ပါ… နောင်အချိန်နည်းနည်းကြာမှ သဘောပေါက်သွားတယ်..
စကားမစပ် … အဲ့ကလေးမကို အရမ်းချစ်တယ်…
အင်း ..ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ …ခြားနားတာတွေ များတော့ …တခါတခါ
ကိုယ် ပဲ့ကိုင်ရတဲ့ အိပ်မက်လှေက ခါ-ထွက်သွားတာ ခနခန…
အဆင်မပြေမှုတွေများတဲ့ ဘ၀မှာ … အဆင်ပြေတာ ကံကောင်းတာတခုကတော့…
နင်က ဘ၀မှာ ရဖူးတဲ့ အကောင်းဆုံးနဲ့ တခုတည်းသော ဆုလာဘ် ပါ…။
နင်ကအရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းသလို. မုန်းဖို့လဲကောင်းတယ်..စိုင်းစိုင်း လိုဘော်ဒီရမှ ပြန်ချစ်မယ်. .ဒါဗဲ
နီတို့က ကုလားကားနဲ့ ကိုရီးယားကားကို တစ်ဇာတ်ထဲ ပေါင်းရိုက်တယ်…
မျက်စေ့မူးပြီး ခေါင်းလည်သွားပြီ… တတ်လည်း တတ်နိုင်ကြပါပေ့… အဟစ် အဟစ်
သဘောလည်း တူဂျယဲ့နဲ့ဗျာ …
သူလုပ်မှ မရူးရင် ကျော် မရူးတော့ဘာဘု…
အိမ်း… ကျောက်စ်လည်း ကျောက်ဆေးထိုးထားလို့…
မဟုတ်ရင် ဒီဇာတ်လမ်းမှာ ကျောက်စ် ရူးလောက်တယ်…
ငင် ..? ?¿¿
အူးဆာ …သများကိုသူပါ ..အဲ့ဝတုတ်ကို အခြေနေမကောင်းရင် ကားတင်ပြေးမို့ …..
ကော့ကရိတ်ကို ပြေးမယ်… မမ နဲ့ မိုးမိုး ရှိတယ်လေ…
ဟိုအရင်နင် ဆင်ယင်ခဲ့တဲ့ အ၀တ်တွေ
တေးဆို – ကိုင်ဇာ
ချမ်းလည်းချမ်းတယ် လွမ်းလည်းလွမ်းတယ် စီးရီးမှ…။
အူးလေး ဆိုင်ဆိုးမောင် နဲ့ တွေ့ပေးမယ်… တကယ်…
သိပ်ချစ်တယ် အရမ်းမုန်းတယ်. .
ငါ နင့်ကို အရမ်းချစ်လို့ပါ…
ဖတ်ပြီး ဘာ ပြောရမဲမသိ။
နာ လည်း ရှီးကိုပဲချစ်တယ်။
နင် ချစ်ဖို့ကောင်းတာ ပိုသိမိတယ်…
အဲ့မမယီးက ငါကြိုက်ဖူးတဲ့ ကောင်မလေးတွေအားလုံးကို
နောက်မမိုက်တော့ပါဘူး ဒီတစ်ရာသီ ဘောပွဲလဲမကျိတော့ပါဝူးဆို ပြန်လက်ခံလိုက် ရှီး
အဲ့သာမီးလေးရအောင် သူ့ကို အရင်ဖြောင်းဖြပါဂျာ..
ရှီး ပျောက်နေတာ မောင်ဂီ နဲ့ ရန်ဖြစ်ထားလို့ လား။
ရန်ဖြစ်ပြီး ပြန်ချစ်ရတာ ပိုပြီး မြဲသတဲ့။
ဟိုလေ … ကိုရင်စိုင်းခမ်းတို့လိုလည်း တော်ကီ မညက်ပါဘုဗျာ…
အဲ့ကလေးမကို… ဆံပင်နီနီပါးဖောင်းဖောင်းနဲ့ အသားဖြူဖြူ သမီးလေးတယောက် မွေးမယ်ဆိုရင်
အဲ့ ကလေးမအဖေ ကျော်ဖြစ်ပါရစေပဲ ပြောဖူးတာပါ အရီးရာ…
အိမ်က အဖေအမေ သားတော်မောင်ရော ကိုးဆယ်ကျော်တဲ့ ဘိုးဘွားရောရဲ့ အသီးကျော်လေးလေ…
မိုးလင်းတိုင်း ကရင်မလေးက ဘာတဲ့လဲတဲ့ …
ကိုင်း …အာ့ ကျော့် breakfast ဆို
ကျုပ် ကရင်မလေးကို ကျပ်ပေးနေတဲ့ထဲ …
ရှီးဂလေးရယ် ငဂီရယ် ဦးကြောင်ရယ် သုံးဂေါင်ပေါင်း မင်ဂါဆောင်ရအောင်… ဟိုဒင်း… ငဂီကို သဒို့တားအရမ် လုပ်ခိုင်းမို့ပေါဒါ…။ ပြီးရင် ရှီးနဲ့ကြောင်နဲ့ ငပလီသွား ဟမ်းနီးမွမ်းထွက်.. ဒင်းဂ မောင်တောသွား နယ်ခြားစောင့်တပ်မှာ အမှုထမ်း.. ဒန်တန့်တန်.. ငါကွ..။ ပုံ – ရှီးဘဲကြောင်
မိရိုစီ ကို ရှီးနဲ့ လိုက်ဖက်လွန်းလို့ မြန်မင်္ဂလုံဆုံကြဟေ့
ဟို “၀ီ” ဥပဒေဂျီး အတည်မဖြစ်ခင်
အာ့ယီး အတည်ဖြစ်လည်းဗျာ …
ဂေါတမ ဗုဒ္ဓကို ကြည်ညိုတယ်…
အဲ့ ဖုန်းဂျီးကိုတော့ ချဉ်သဗျာ…
အဲ လို လုပ်စမ်းပါ
အင်း … နားမလည်တော့ဘူး။ စုံစမ်းမေးမြန်းတာ မကြိုက်လို့ မေးတာတော့ မဟုတ်ဘူး။ မှန်းကြည့်ရတာ ဘာသာရေးကိစ္စ ထင်တာပဲ။ ဘာပဲပြောပြော တကယ်ချစ်တဲ့သူတွေ ဆုံဆည်းကြပါစေ၊ ဟိုခေတ်က ဒုက္ခမျိုး တွေ ကင်းဝေးကြပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပါတယ်။
လူ ၂ယောက်ပေါင်းစပ်ဖို့က အချစ်က အဓိကကျတယ်ဆိုပေမဲ့ တစ်ချို့အရာတွေမှာ တစ်မျိုးမျိုးကြီးပဲဂျာ. .ရှီး လဲမပြည့်စုံသေးသလို အူးဂီလဲလိုအပ်တာတွေရှိနေပါသေးတယ်. .ဆိုတော့ကာ မင်္ဂလာသတင်းကြားရမှာပါ . ရှီး တို့၂ယောက်ကို ဦးဦး ချစ်မတို့တွေအရမ်းချစ်ကြတာသိရတော့ အရမ်းပျော်တယ်. .ရှီး အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားမှာပါ.
အလိုလေး ..အဆင်ပြေတာမြင်တော့လဲ …၀မ်းသာလုံးများတောင်ဆို့ပါရဲ့ …တကယ်ပါ…
ဒီလိုဘဲပြောတော့မယ် ….. နော်
မင်္ဂါဆောင် ရင် ဖိတ်အူးနော်
ဖိုးမူကြီး နဲ့ ဖိုးခွား
ချစ်သူတိုင်း ပေါင်းကြစေချင်တာ အချစ်လမ်းခရီး သာယာ ဖြောင့်ဖြူးစေချင်တာ ဘာညာဆိုတဲ့စကား ကို အရင်က သတိမထားမိ ဘူး.သာမန်လျှံကာပဲ ဖတ်ဖူးကြားဖူးပြီး……ဒီစကားရဲ့ တန်ဖိုးဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာ လဲ သောက်ဂရုမစိုက်ခဲ့ဘူး…
နားလည်မှုနည်းကြလို့.. အနစ်နာခံနိုင်မှု မရှိလို့…အလျော့ပေးနိုင်မှုသေးငယ်လို့..စတဲ့..excuse တွေနဲ့ ကွဲကြပြဲကြ..မပေါင်းစည်းကြရတာ..မဆုံကြတော့တာလို့ပဲ သာမန်တွေးခဲ့ဖူးတယ်..
တစ်ကယ်ကြုံလာတဲ့ အခါ ကျတော့မှ..ဒါတွေအပြင် တခြားရှင်းမရတဲ့ ကိစ္စတွေလဲရှိပါသေးလားဆိုတာ သိသွားပြီး …
reality ကို စေ့ငုမိသွားတယ်..တစ်ခါ တစ်ရံမှာ..နှစ်သီးနှစ်ဘက် အစဉ်ပြေနားလည်မှုရှိနေ ပြီး ……
အရမ်း ကိချစ်ခင်ကြင်နာနေပေမယ့်လဲ ..ရှေ့ ဆက်တိုးလိူ့မရတဲ့ အခြေအနေတွေ..ငဲ့ညှာရမှာတွေ စောင့်ထိမ်းရမယ့် စည်းကမ်းတွေ လူမှုကျင့်ဝတ်တွေ မိဘ ဆွေမျိုးတွေကို..ကျော်ဖြတ်ဖို့ဆိုတာ..က..ကိုယ်တိုင်ကြုံမှ သိကြမှာ…